C/laahi Yuusuf oo amar ku bixiyey in la xidho Xuduudaha u dhexeeya Puntland iyo Somaliya inteeda kale
Laascaanood,30 Jun 2004-Col C/laahi Yuusuf ayaa ku amray Hay?adaha Ammaanka u qaabilsan Maamul Gobaleedka Puntland inay xidhaan Dhamaan Xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya inteeda kale.
C/laahi Yuusuf oo shalay galab la hadlayay Saraakiisha Ciidamadda Puntland ayaa sheegay inay soo kordhayaan falalka lagu ugaadhsanayo masuuliyiinta maamul Gobaleedka Puntland. Wuxuuna sheegay in weeraradda is daba jooga ah ee ka dhacay Puntland ay ka dambeeyaan dad uu ku tilmaamay inay dhibsananayaan nidaamka,kala dambaynta,iyo nabada ka jirta Puntland.
C/laahi Yuusuf waxa uu ku amray Booliska dawladgoboleedka Puntland inay si deg deg ah Sharciga ku horkeenaan Shaqsiyaadkii ka dambeeyay Dilkii loo gaystay duqii magaalada Boosaaso, iyo sarkaal ka tirsanaa waaxda ilaalada canshuuraha Puntland . Falkaas ka dhacay Boosaaso ayaa isagan lagu dhaawacay Xoghayihii Guud ee Canshuuraha Puntland. Wuxuuna hoosta ka xariiqay in Maamul Gobaleedka Puntland uu sii jiri doono oo aysan u istaagi doonin Falalka waxashnimada ah ah ee ay wadaan cadowga shisheeye oo uu ka gaabsaday inuu magacaabo.
Mar uu ka hadlayay C/laahi Yuusuf Shirka Soomaalida uga socda Kenya waxa uu sheegay inuu Rajaynayo in Shirkaasi ay ka soo baxdo Dawlad Soomaaliyeed. Wuxuuna sheegay in dhawaan ay gudbin doonaan Xubnihii uga mid noqon lahaa Baarlamaanka loo dhisayo Soomaaliya.
Xanibaadii lagu soo rogay gawaadhida isaga gooshta Garoowe iyo Boosaaso oo la qaaday.
Laascaanood,Somalia,June 30, 2004-.Masuuliyiinta Puntland ayaa xanibaadii saarneyd ka qaaday gawaadhida xamuulka ee soo gasha kana baxda Magaalada Boosaaso, ka dib markii dhowaantan halkaa lagu diley ala ha u naxariistee duqii magaalada Boosaaso Mr Sayruuq iyo sarkaaal ka tirsanaa maamulka gobolka Bari.
Amar cusub oo maalinimadii shaley ka soo baxay taliyaha booliiska qeybta Gobolka Bari ayaa waxa uu ku sheegay in la sii daayo gawaadhida xamuulka ee waa weyn kana baxa Magaalaa Boosaaso, iyadoo gawaadhidani maalintii doraad ay ku xanibmeen magaalada gudaheeda, ka dib markii uu taliyaha uu amar ku bixiyey in wax gawaadhi ahi ayan habayaraatee ka bixi Karin magaalada Boosaaso mid soo gala mooyee.
Xanibaadan gawaadhida ayaa ka danbeysay ka dib dilkii maalintii dorraad lagula kacay masuuliyiintii ka tirsanaa gobolka Bari, iyadoo maalintii shaleyna shir saxaafadeed uu qabtay guddoomiye ku xigeenka Bari uu si kulul u cambaareeyey dilkaasi loo geystay saraakiisha ka tirsaneyd gobolka.
Dhinaca kale, taliyaha qeybta gobolka Bari ayaa sheegay in fasaxaadani ay tahay gawaadhida waa weyn balse aaney aheyn gawaadhida nooca yar yar, iyadoo kuwa yar yar aan xanibaada wali laga qaadin.
Ma jiraan wax gawaadhi ah oo ilamaa iyo doraad ka soo baxay Magaalada Boosaaso, arrintani ayaa waxa ay sababtay in uu ganacsigii istaago oo safaro badan oo u bixi lahaa meelo badan oo ka mid ahgobolada dalka Soomaaliya ee kala gadisan.
Waxaan ilaa iyo maanta aan lagu guulaysan in gacanta lagu dhigo gacankudhiiglayaashii ka danbeeyey dilka masuuliyiintaas,iyadoo qaar ka tirsan masuuliyiinta Puntland ay horay u balan qaadeen in "24 saacadood" gudahood lagu soo qaban doono nimankaas.